Car Back Mirror အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ကားရဲ. နောက်ကြည့်မှန်က အနောက် အားလုံး မြင်စေဖို.
မြင်ကွင်းချဲ. ကားနောက်ကြည့်မှန်ကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
ရိုးရိုး ကားနောက်ကြည့်ထက် ၃ဆ ပို၍ မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနံ 300 mm ရှိပါမယ်။
ကားတိုက်နိုင် မတိုက်နိုင်ကို လွယ်ကူစွာ ကြည့်နိုင်ပါမယ်။
အမည်: Car Back Mirror